यो सुरुवात हो, नेपालको परिस्थिति अझ नराम्रो हुनेवाला छ : डा. जोस भ्यानडिलिएर – Our News Crew
यो सुरुवात हो, नेपालको परिस्थिति अझ नराम्रो हुनेवाला छ : डा. जोस भ्यानडिलिएर
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओका नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि डा. जोस भ्यानडिलिएरले नेपालमा हाल देखिएको कोरोना संक्रमणको संख्या सुरुवातमात्रै भएको र भविष्यमा संक्रमितको संख्या अझ धेरै बढ्ने बताएका छन्।
‘अहिले नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दैछ। केही महिनाअघि आप्रवासीहरुमा बढी देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘यो सुरुवातमात्रै हो। आगामी हप्ता, महिनामा निकै नै केस बढ्नेछन्। परिस्थिति अझ नराम्रो हुनेवाला छ।’उनले सामाजमा पाका उमेरका मानिसहरुमा पनि संक्रमण बढ्दै जाने भएकाले मृत्युको संख्या पनि बढ्दै जाने बताए। तर, ब्राजिलजस्ता धेरै प्रभावित देशमा पनि एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म संक्रमित देखिएकाले सबै जनसंख्यालाई संक्रमण नहुने भन्दै नआत्तिन पनि आग्रह गरे।
उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिडविरुद्ध लड्न नेपाल सरकारलाई पूर्व तयारी, निगरानी, तथ्यांक संकलन, प्रयोगशालाको क्षमता र गुणस्तर सुनिश्चितता, लजिस्टिक तथा मापदण्ड बनाउन सहयोग गरिरहेको जानकारी समेत दिए।
काठमाडौंमा थपिए २३२ कोरोना संक्रमित,मृत्युहुनेको सख्या १६४ पुग्यो
बारामा दुईजना संक्रमितको ज्यान गयो